AmaProteas esifazane anezinombolo ezincomekayo
Momentum Proteas captain Dane van Niekerk
Ovulayo, u-Laura Wolvaardt uhambe phambili kuma-average okushaya kuma-Momentum Proteas kwi-2017 ICC Women’s World Cup, kwathi ukapteni u-Dané van Niekerk waphosa kahle – hayi kwi-South Africa yodwa kodwa kubona bonke.
Iqembu lase-South Africa lathinta abantu abaningi ngokufinyelela kuma-semi-final kulenyanga edlulile e-England. Bagcina behlulwe iqembu lasekhaya, elaqhubeka lanqoba i-final lidlala ne-India e-Lord’s ngeSonto.
u-Wolvaardt, oyedwa wabadlali abathathu abakhethiwe kwiqembu lomqhudelwano, washaya ama-runs angu-324 nge-average engu-64.80. Lomdlali oneminyaka engu-18 wahlanganisa o-50 abane emidlalweni eyisikhombisa, wathola ama-runs amakhulu angu-71. Avula naye, u-Lizelle Lee naye wadlala kahle ngokushaya. Washaya ama-runs angu-269 nge-average engu-44.83. u-Lee wabane-strike rate esingu-103.46, okwaba yinto eyagqhama njengoba yayinkulu kubadlali abavula umdlalo, kanti o-6 abangu-12 ibona abaningi kunabanye abashayayo.
Omunye umdlali owadlala kahle ngokushaya, kwaba ukapteni odlulile u-Mignon du Preez, owathola i-average engu-57.25 yamubeka kunombolo-7 kubona bonke abadlali. Wathola ama-runs angu-229 sekuphelele.
“Ukushaya hlezi kusiphathisa ngekhanda,” kusho umqeqeshi u-Hilton Moreeng. “Indlela abashayayo abadlala ngayo kulendebe yomhlaba kwaveza ukukhula, kanye nomsebenzi owenziwa. Ukushaya ngamandla kwagqhama futhi yinto ebalulekile engashintsha indlela umdlalo ohamba ngayo uma umdlali engenza lokho. Ngokuphelele kwakuncomeka futhi yinto esingakha kuyona.”
u-Van Niekerk, wahamba phambili kubadlali abaphosayo ngama-wicket angu-15, waqeda engaphambili ngama-wicket amabili kunomdlali wasekhaya u-Marizanne Kapp (13). Bobabili bahlangane no-Wolvaardt kwiqembu le-ICC lomhlaba.
Ukapteni wathola i-average engama-runs angu-10 nge-wicket eyodwa futhi wadlala kahle emdlalweni ngokuthola ama-wicket amane engekho ama-runs bedlala ne-West Indies ngesikhathi semidlalo yesixuku. Kwaku eyodwa yama-wicket amane kwamathathu kuphosa u-Van Niekerk, owaphinde wahlanganisa ama-runs angu-99 eshaya.
u-Kapp, wathola ama-wicket akhe nge-averge engu-19.38 wathola okuhle ngo-4/14, naye bedlala ne-West Indies. Ube oyedwa kubadlali be-South Africa abane abathola ama-wicket angu-10 noma adlulile, abanye ababili kube u-Sune Luus (10 wickets at 17.40) no-Shabnim Ismail (10 wickets at 26.40).
“Abaphosayo hlezi bazi ukuthi kumele benzene,” kunezelela u-Moreeng. “Batshengisile ukuthi kwizimo ezihlukile esabhekana nazo emhlabeni futhi bakuphinda bedlala ne-England.”
“Abahlasela ngokuphosa okuhle emhlabeni jikelele futhi angikwazi ukulinda ukubona ukuthi yini enye abangayenza kusasa njengoba sebetshengise umhlaba ukuthi balunge kanjani.”
i-CSA ihalalisela amaProteas amathathu ngokufakwa eqenjini le-ICC WWC iCSA incoma amaMomentum Proteas ngomqhudelwano wawo wendebe yomhlaba ongakhohlakali i-England ihlula amaProteas women ukungena kwi-final yomqhudelwano wendebe yomhlaba AmaProteas Women azingela ukuqopha umlando u-Luus ubheka okuhle ngaphambi kwe-semi-final yamaProteas esifazane Australia iqhubeka nokungahlulwa ibhekene ne-South Africa AmaProteas abesifazana alungele umdlalo ne-Australia uMoreeng ujabuliswa okunqotshwe amaProteas abesifazane okwamanje uVan Niekerk no-Ismail bayaqhakaza njengoba amaProteas esifazane afinyelela kuma-semi-final endebe yomhlaba AmaProteas esifazane abheke ukusondela kuma-semi endebe yomhlaba Yonke imidlalo kumele siyinqobe – uDu Preez